Hlola iGuadalupe - World Tourism Portal
Okufanele ukwenze eGuadalupe
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeGuadalupe
Bukela ividiyo ngeGuadalupe
Hlola iGuadalupe ngesinye isikhathi eyaziwa ngokuthi yiButterfly Island, ngesimo seziqhingi zayo ezimbili ezinkulu.
IGuadalupe yiqembu leziqhingi empumalanga I-Caribbean kwakha isifunda phesheya kwezilwandle France. Siqukethe iziqhingi eziyisithupha ezakhiwe, iBasse-Terre, iGrande-Terre, iMarie-Galante, iLa Désirade, kanye nama-Îles des Saintes, kanye neziqhingi eziningi ezingalwanga. Ilele eningizimu ye-Antigua neBarbuda neMontserrat, eningizimu-mpumalanga ye E-Puerto Rico nasenyakatho yeDominica. Inhlokodolobha yayo yiBasse-Terre ogwini olusentshonalanga; kodwa-ke, idolobha elikhulu kunawo wonke yiPointe-à-Pitre.
Njengayo yonke eminye iminyango yaphesheya kwezilwandle, iyingxenye ebalulekile yeFrance. Njengenkundla ebumbekayo ye-European Union ne-Eurozone, i-euro yimali yayo esemthethweni futhi noma isiphi isakhamuzi saseYurophu Union sikhululekile ukuhlala futhi sisebenze lapho unomphela. Njengomnyango waphesheya kwezilwandle, nokho, akuyona ingxenye yendawo yeSchengen. Ulimi olusemthethweni isiFulentshi; I-Antillean, isiCreole kuyakhulunywa futhi.
IGuadeloupe iyisiqhingi seziqhingi ezingaphezu kuka-12, kanye neziqhingi namadwala akhiwe lapho ulwandle lwasempumalanga nentshonalanga luhlangana nolwandle olusentshonalanga ye-Atlantic. Itholakala esiQhingini saseLeeward engxenyeni esenyakatho ye-Lesser Antilles, i-arc engaphansi kwentaba-mlilo. Ngasenyakatho kukhona i-Antigua neBarbuda neBritish Oversea Territory yaseMontserrat, kanti iDominica ilele eningizimu.
Iziqhingi ezimbili eziyinhloko Basse-Terre (entshonalanga) kanye IGrande-Terre (empumalanga), akha isimo sebhabhathane njengoba sibukwa ngenhla, 'amaphiko' awo amabili ahlukaniswe yiGrand Cul-de-Sac Marin, uRivière Salée noPetit Cul-de-Sac Marin. Ingaphezulu kwengxenye yomphezulu womhlaba waseGuadeloupe uqukethe i-Basse-Terre eyi-847.8 km2. Lesi siqhingi sinezintaba, siqukethe iziqongo ezinjengeMount Sans Toucher (amamitha angama-4,442 1,354; amamitha angu-4,143) neGrande Découverte (amamitha angu-1,263; amamitha ayi-1,467), sifinyelela phezulu kwentaba-mlilo esebenzayo eLa Grande Soufrière, kanye nentaba ephakeme kakhulu eNtabeni i-Antilles encanyana. ukuphakama kwamamitha ayi-4,813 (XNUMX ft). Ngokuphambene neGrande-Terre iyisicaba kakhulu, inamatshe amatshe aya ngasenyakatho, amagquma angajwayelekile esikhungweni, imindunduma ngaseningizimu nentshonalanga emhlophe namabhishi amhlophe agcinwe ezigodini zamakhorali ogwini oluseningizimu. Yilapho okutholakale khona izindawo zokuvakasha eziphambili.
UMarie-Galante uyisiqhingi sesithathu ngobukhulu, silandelwa yiLa Désirade, ithafa elingamatshe elakhiwe ngogodo olusenyakatho, indawo ephakeme kakhulu okungamamitha angama-275 (902 ft). Ngaseningizimu kukhona i-Îles de Petite-Terre, okuyiziqhingi ezimbili (iTerre de Haut neTerre de Bas) ebanga 2 km2.
Les Saintes kuyisiqhingi seziqhingi eziyisishiyagalombili zazo ezimbili; ITerre-de-Bas neTerre-de-Haut kuhlalwa khona. Isimo sendawo sifana nesaseBasse-Terre, enamagquma wentaba-mlilo nokugudla ugu okungajwayelekile olunamakhasi ajulile.
Kukhona ezinye iziqhingi eziningi ezincanyana, ikakhulukazi i-Tête à l'Anglais, Îlet à Kahouanne, ,let à Fajou, Îlet Macou, Îlet aux Foux, Îlet de Carénage, La Biche, Îlet Crabière, Îlet e Goyaves, Îlet à Cochons, Îlet à I-Boissard, i-àlet à Chasse no-Îlet du Gosier.
I-Pointe-à-Pitre: namadlelo ayo, inhloko-dolobha yezomnotho iGuadeloupe
Gosier: mhlawumbe enye yezindawo ezithakazelisa kakhulu zeGuadeloupe ukujabulela ubusuku bosuku. (Ungangena kuma-nightclub amaningi ngezingubo ezifanele, okungukuthi, azikho izihlakala, akukho shorts)
ISt François uma uya endaweni empumalanga yeGuadeloupe, uzofika eLa Pointe des Chateaux, indawo ebunjiwe enesihlabathi namadwala anobujamo bomuzi ngokusobala. Ukusuka lapho, ungabheka eziqhingini zaseLa Désirade, ePetite Terre, eMarie Galante, e-Les Saintes, e-La Dominique kodwa futhi ube nombono omuhle weziqhingi iGrande Terre futhi kude neBasse Terre.
ISt Anne muhle kakhulu futhi uyabonakala kodwa futhi uyidolobha lezivakashi kanye nolwandle (mhlawumbe indawo yezivakashi yaseGuadeloupe). Uzothola lonke uhlobo lwamabha. Izindawo zokudlela zivulwa kuze kube sebusuku kakhulu
I-Baie-Mahault: indawo yezimboni neyentengiso yaseGuadeloupe, akukho lutho olukhethekile ongayenza noma olukubonayo. Lapha kumi yezitolo ezinkulu kunazo zonke zesiqhingi.
Ungaphuthelwa izimpophoma ezimangalisayo ehlathini Basse-Terre (Izimpophoma zeCarbet). Ezinye zingakapheli imizuzu emi-5 kuya kwengama-10 ukusuka ibanga ukusuka endaweni yokupaka eseduze, ezinye zidinga okungenani amahora angama-3- 4 ukugibela izintaba (lezo, ezivame ukwandiswa kaningi abanye abavakashi futhi ungazithola usuwedwa endaweni enamanzi amangalisayo phakathi akukho ndawo - okuhlangenwe nakho okumangazayo!).
Ama-rum distilleries endawo anikela izinkambo (hlola izikhathi zokuvula njengoba zingahluka kuye ngesizini nonyaka) ezifanele okwamanje ngoba ukukhiqizwa kwama-rum kuyingxenye ebalulekile yomnotho waseGuadeloupe. Futhi ukufaka izampula zezindimbane zalapha ekhaya kuyafaneleka impela leso sikhathi.
Noma zingahle zingabi yindlela enhle yokufika esiqhingini, ukugibela ibhasi kuseyinto ongafanele ungaphuthelwa kuyo. Ezishibhile, zigcwele izindawo, eziqhutshwa ngabashayeli abanesibindi, ungajabulela ipanorama enhle yaseCaribbean ngomsindo womculo weGuadeloupean zouk. Eminye imizila ayilungile kubagibeli abanezisu ezibuthakathaka.
Amabhishi: I-Caravel (lapho kukhona khona i-Club Med (ugu lolwandle lusobala, njengoba kufunwa ngumthetho waseFrance), ibhishi ledolobha elinamanzi alo aluhlaza okwesibhakabhaka nomoya wasemkhathini uwonke, ibhishi leBois Jolan, libukeka kabi kakhulu.
Le Moule idolobha laseMoule liyindawo enhle uma ufuna ukungabi kude nokuyaluza kwePointe-à-Pitre, iGosier neBaie Mahault. Ngaphandle nje kwedolobha: Ungavakashela indawo yokuvubukula ne-ethnographic ye-Edgar Clerc Museum. Ungabona imibukiso mayelana nempucuko yama-Arawak namaCarib amaNdiya.
Edolobheni: Ungakujabulela ukubukwa komgwaqo ngesikhathi sasemini kanye nakusihlwa. Kubantu abathanda ukusebenzisa i-surf futhi banezinga elihle, ungathola enye yezindawo ezidumile zama-surf zaseGuadalupe ekungeneni kwedolobha. Ungathola inxanxathela yezitolo ekungeneni kwedolobha nasendaweni ephansi yedolobha. Izitolo zivulwa kusukela ngoMsombuluko kuya kuMgqibelo, kufaka phakathi uMgqibelo ntambama, into eyivelakancane eGuadalupe. Ungabona idolobha elihle kakhulu ngesonto laso, amanxiwa alo amadala. Ukuya eSalt-François Direction: Uma ufuna ugu, ungaya olwandle "l'autre bord" noma "l'anse à l'eau", lapho usuka edolobheni. Uzobona i- “maison Zavellos” okuyindlu yakudala yobukoloni. Abanye bathi yindlu eyakhiwe. Idolobhana laseMoule nalo lingenye yezindawo zokuqala ezakhiwa ngama-rum ezikhiqiza i-Damoiseau rum edumile. Uma uthanda ukuhamba, ungaya “e-Olie Olive” lapho kunamadwala amahle noma iya olwandle "plage des rouleaux".
Noma kungaze kube yindlela enhle yokufika esiqhingini, ukugibela ibhasi kuseyinto ongafanele ungaphuthelwa kuyo. Ezishibhile, zigcwele izindawo, eziqhutshwa ngabashayeli abanesibindi, ungakwazi ukujabulela panorama enhle yeCaribbean ngomsindo womculo weGuadalupean zouk. Eminye imizila ayilungile kubagibeli abanezisu ezibuthakathaka. Uma uqaphela, ungagibela amahhashi mahhala emuva ukuze uthole isipiliyoni “esinengqondo” sabavakashi.
Umoya oshiswa umoya wangaphandle; umswakama ophezulu ngokulinganisela
IBasse-Terre iyintaba-mlilo eqhamuka ezintabeni ezingaphakathi; IGrande-Terre ukwakheka kwamatshe amancane aphakeme; iningi lezi ezinye iziqhingi eziyisikhombisa zingumsuka wentaba-mlilo
IGuadalupe isiqhingi esixube kakhulu amasiko okufika okulandelayo kwamaNdiya, iLebanon, iSyria, isiShayina sikwenza kube yi-Eldorado lapho ukuhlala ndawonye kubaluleke kakhulu.
Izimoto zingaqashwa esikhumulweni sezindiza ePointe-à-Pitre noma zibhukelwe online kumasayithi anjengeRentacar naseSatevan. Imigwaqo emikhulu iyizinga elifanayo nelidolobha elikhulu France, kepha imigwaqo emincane imvamisa ayilingani, igcwele ibhodwe futhi ibe yingozi. Ukuqonda kuyadingeka! Abashayeli bavame ukungacaciswa, kepha kuyaqabukela kube nolaka.
Ukushona phansi kwe-Scuba nokuhlwitha. Kukhona okunezinhlobonhlobo ezimangalisayo zezinhlanzi ezishisayo, ngisho nasemanzini angaphansi kwemitha ejulile. Kulabo abangakwazi ukubhukuda, uhambo lwesikebhe esingaphansi kwesilazi luyatholakala.
Kunemikhosi eminingi okufanele uyihambele eGuadalupe. EGuadalupe bababiza ngokuthi “amaqembu asemgwaqweni”. Basebenzisa izimbambo ezimibalabala futhi bababambe bazungeze izihlakala zabo ukuze kufane imibala yazo zonke izizwe. Amaqembu abo aqhubeka ubusuku bonke kuze kuse. Kwesinye isikhathi bazibiza ngokuthi “ama-swatson”.
Isimilo sama-Antilles yindwangu enemibala egqamile kaMadras.
I-rum eyenziwe endaweni nayo ihlukile futhi ishibhile kakhulu ukuyithenga. Isampula efanelekile (ngesikhathi kusihlwa kwelinye lamabhishi amahle noma ekhaya lapho ibonisa izithombe zeholide kubangani nomndeni ukufudumeza wonke umuntu aze afike ekushiseni kweCaribbean)
Akufanele alahlwe, ipuleti iColombo (inkukhu, ilayisi, i-curry), engeniswa ivela eNdiya, isiphenduke ipuleti lesifunda elijwayelekile.
Isiphuzo sendawo singumbala omhlophe. Zama i- "'Ti Punch" (I-Petit Punch / i-Punch encane) (i-rum, lime, noshukela / umoba onsundu). Ipakisha udonga, ngakho-ke zilungiselele ukuncibilika endleleni yokuphila yesiqhingi.
Ngenkathi ngokusemthethweni iyingxenye yeFrance, izwe alinayo indlela yokuphila yaseYurophu. Eqinisweni, impilo eCaribbean inejubane elihamba kancane. Amabhisikhi asebenza kakhulu njalo, amatekisi kunzima ukuwathola, izitolo ezincane zivulwa noma azivali ngaso sonke isikhathi, ukuzikhethela ezitolo kwesinye isikhathi kudla isikhathi esiningi. Zama ukuwela esigabeni sendawo futhi ungakhali ngezinto ezicasulayo ezincane njengoba abantu baseGuadalupi bazokubona lokho njengecala lokuphila kwabo. Futhi bayaziqhenya ngomehluko phakathi I-Caribbean nesitayela sempilo y Metropolitan (French)!
Kumahhovisi amaningi ePosi uzothola umshini ozenzakalelayo (ophuzi) onesikali nesikrini. Vele ubeke imeyili yakho esikalini, utshele umshini (waseFrance noma wesiNgisi) lapho uya khona, ukhokhe inani elikhonjisiwe bese umshini uletha isitembu esiphrintiwe.
Hlola iGuadalupe ngolwazi lwesikhathi sempilo.